गम्भीर महामारीको स्थितिले गर्दा फिनल्याण्ड (Finland) मा लगभग अप्रिल 1 सम्म रेस्टुरेन्ट ग्राहकका लागि बन्द रहने छन् - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu
गम्भीर महामारीको स्थितिले गर्दा फिनल्याण्ड (Finland) मा लगभग अप्रिल 1 सम्म रेस्टुरेन्ट ग्राहकका लागि बन्द रहने छन्
Tiedote 28.3.2021 Ravintolat kiinni asiakkailta 18.4. asti lähes koko maassa vakavan tautitilanteen vuoksi, nepali
प्रेस विज्ञप्ति, मार्च 28, 2021
रेस्टुरेन्ट तथा अन्य खाद्यान्न र पेय सेवा व्यवसायहरू कोभिड-19 महामारीको वृद्धि रोक्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरूमा अप्रिल 18, 2021 सम्ममा ग्राहकका लागि बन्द रहनुपर्छ।
मार्च9देखि सुरु भएको बन्द अब रेष्टुरेन्टका बन्दको विस्तार गर्ने सहमति गरेको छ, जुन महामारीको स्थितिले गर्दा आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा बन्दको निर्बाध निरन्तरता सुनिश्चित गर्दछ। पहिले नै सहमत भएका बन्दको समयमा, रेस्टुरेन्टहरू एल्याण्ड तथा दक्षिणी ओस्ट्रोबोथोनिया (Ostrobothnia) मा 29 मार्च देखि सुरु हुने व्यवसायको लागि खोल्न सक्छ। यही कुरा नगरपालिकाको किट्टिला (Kittilä) को अपवाद सहित लापल्याण्ड (Lapland) मा लागू हुन्छ। उत्तरी साभो तथा उत्तर करेलिया (North Karelia) मा, रेस्टुरेन्टहरू ग्राहकहरूलाई मार्च 29 देखि सुरु गरिनुपर्छ।
जे होस्, रेस्टुरेन्टहरूले अझै पनि प्याक गरेको वा डेलीभरिको लागि खाना बेच्न सक्छन्। बन्दको समयमा, रेस्टुरेन्ट तथा क्याफेहरूलाई ग्राहकहरूमा लीन वा तिनीहरूलाई या त आफैँ डेलिभर गर्न वा अन्य सेवा प्रदायकहरूको प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ।
महामारी विज्ञान स्थितिले गर्दा रेस्टुरेन्टहरू बन्द गर्न आवश्यक छ।
निम्न क्षेत्र तथा निम्न नगरपालिकामा रेस्टुरेन्टहरू ग्राहकहरूको लागि बन्द हुनुपर्छ:
दक्षिण साभो (South Savo)
उत्तरी साभो (North Savo)
उत्तरी ओस्ट्रोबोथोनिया (North Ostrobothnia)
निम्नलिखित क्षेत्रहरू बन्द गर्ने आवश्यकता अन्तर्गत पर्दैनन्: एल्याण्ड, दक्षिणी ओस्ट्रोबोथोनिया, सेन्ट्रल ओस्ट्रोबोथोनिया (Åland, South Ostrobothnia, Central Ostrobothnia) तथा किनू (Kainuu)। ल्यापल्याण्ड (Lapland)
क्षेत्रमा, किट्टिला (Kittilä) को नगरपालिका बाहेक रेस्टुरेन्टहरू खुला हुन सक्छन्।
ल्यापल्याण्ड (Lapland) मा बन्द गर्ने आवश्यकताहरूमा विशेष विचार
ल्यापल्याण्ड (Lapland) को अपवाद सहित, रेस्टुरेन्ट बन्द हुने क्षेत्रको अनुसार गरिन्छ। सरकारलाई आफ्नो जबाफमा, संसदले लामो दूरीको धेरै जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई अझ राम्ररी विचार गर्नुपर्छ भनि निष्कर्ष निकाल्यो। संसद तथा स्वास्थ्य अधिकारीका बयानको आधारमा, किट्टिलामा रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुनुपर्छ। ल्यापल्याण्ड (Lapland) को सबै अन्य नगरपालिकाहरूमा, व्यवसायका लागि रेस्टुरेन्टहरू मार्च 29 देखि सुरु हुन सक्छ।
बन्दको लागि आधारहरूलाई साप्ताहिक रूपले परीक्षण गरियो
सरकारले निर्णयमा संशोधन गरी कुनै पनि क्षेत्रमा महामारी विज्ञानको स्थितिको विकास अनुसार बन्द गर्ने तथा बन्दको कडा प्रतिबन्ध गर्नेछ।
खाद्य तथा पेय सेवा व्यवसाय भएका क्षेत्रहरूमा ग्राहकका लागी खुल्ला राख्न अनुमति छ, प्रतिष्ठानहरू सर्ने रोग ऐनमा राखिएको व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ तथा उही ऐनको आधारमा जारी गरिनुपर्छ। यस्ता क्षेत्रहरूमा, रेस्टुरेन्टहरू 23.00 मा बन्द हुनुपर्छ तथा 22.00 मा मादक पदार्थका सेवा बन्द गरिनुपर्छ।
बन्दको प्रभावहरू स्टाफ रेष्टुरेन्टका अपवाद सहित सबै खाद्य तथा पेय सेवा सम्बन्धी व्यवसायहरूमा हुन्छ
बन्द गरिने खाद्य तथा पेय सेवा सम्बन्धी व्यवसायहरू क्याफे, रेस्टुरेन्ट, बार एवम् रात्रि क्लबहरू छन् जुन सार्वजनिक रूपले खुला छन्। बन्द बाहिरी टेरेसहरूमा पनि लागू हुन्छ। जे होस्, बन्दको समयमा टेकवे खानाको बिक्रीको अनुमति छ।
बन्दबाट छुट पाएको रेस्टुरेन्टहरू मात्र सर्वसाधारणमा नखुलेका रेस्टुरेन्टहरू हुन्। त्यसैले, बन्दले वृद्ध व्यक्तिको लागि आवासीय घरहरूमा क्यान्टिनलाई प्रभावित गर्दैन वा स्टाफ रेस्टुरेन्टहरू अन्य ग्राहकका लागि खुला छैनन्, उदाहरणको लागि। व्यावसायिक मोडेलहरू र कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूलाई खाद्य तथा पेय सेवाहरू प्रदान गर्ने व्यवसायहरूको सञ्चालन गर्ने सिद्धान्तहरू भिन्न हुन सक्छ। एक रेस्टुरेन्ट सर्वसाधारणको लागी खुल्ला भएमा, यो बन्द हुनै पर्छ।
तयारी अन्तर्गत रेष्टुरेन्टका लागि सहायता योजना
आर्थिक तथा रोजगार मन्त्रालयले हालको बन्दको उपायहरूले प्रभावित व्यवसायको उचित क्षतिपूर्तिको लागि सहायता योजना तयार पार्दैछ। सहायता योजनाको प्रस्ताव हालै संसदद्वारा विचाराधिन छ तथा व्यावसायिक खर्चको सहायताको अंशको रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सहायता योजनाको थप तयारीमा रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुने विस्तार ध्यानमा राखिनेछ। कम्पनीहरूले राज्य कोषमा क्षतिपूर्तिका लागि आवेदन दिनेछन्। क्षतिपूर्तिका लागि आवेदनहरूलाई मेको शुरुदेखि नै स्वीकार गर्न सकिन्छ।
ऐन तथा निर्णयमा विचार विमर्श
मार्च 28, 2021 मा, संसदले अनुमोदन गर्यो तथा गणतन्त्रका राष्ट्रपतिले एउटा ऐनको पुष्टि गरे, जसले अस्थायी रूपले ग्राहकहरूको लागि रेस्टुरेन्ट तथा अन्य खाद्य एवम् पेय सेवा व्यवसायहरू बन्द गर्नेछ। यस ऐन तथा यस सम्बन्धित आदेश आइतवार 8 मार्च र सोमवार9मार्च बीचको मध्यरातमा लागू हुनेछ।
उही दिन, सरकारले बन्दको असरबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा एक निर्णय जारी गर्यो। सैद्धान्तिक रूपमा, ग्राहकका लागि खाद्य तथा पेय सेवा व्यवसाय महामारीको गति वृद्धि वा सामुदायिक प्रसारण चरणमा रहेको क्षेत्रहरूमा बन्द रहनेछ। आवश्यकता र निर्णयको मूल्याङ्कन फिनिश इन्स्टिच्युट फर हेल्थ एण्ड वेलफेयर (Finnish Institute for Health and Welfare)को विशेषज्ञ मूल्याङ्कनमा आधारित छ।
लीसा हुहताला, वरिष्ठ मन्त्री सल्लाहकार, आर्थिक तथा रोजगार मन्त्रालय, टेलि. +358 295 047 062 रेस्टुरेन्टहरू बन्द
मिको हुसकोनेन, वरिष्ठ मन्त्री सल्लाहकार, आर्थिक तथा रोजगार मन्त्रालय, टेलि. +358 29 506 3732 व्यावसायिक खर्चको समर्थनमा प्रश्नहरू
रेस्टुरेन्ट बन्द हुनुमा प्रश्न तथा जबाफहरू https://tem.fi
सामाजिक विषय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा खाद्य तथा पेय सेवा व्यवसायहरूमा प्रतिबन्धका सम्बन्धमा थप जानकारी
ग्राहक परिसर बन्द गर्नका लागी कम्पनीहरूलाई क्षतिपूर्तिको बारे थप जानकारी
आवास तथा क्याटरिंग सञ्चालन (HE 38/2021 vp; EV 28/2021 vp, फिनिश (Finnish) तथा स्वीडिश (Swedish) मा मात्र) सम्बन्धी ऐनमा अस्थायी रूपले संशोधन गर्न एक ऐनको लागि सरकारको प्रस्तावमा संसदीय जबाफ
एक संक्रमणीय रोग को फैलावट रोक्न खाद्य तथा पेय सेवा व्यवसायका गतिविधिलाई अस्थायी रूपले प्रतिबन्धित गर्ने सरकारी आदेश (PDF, फिनिश (Finnish) तथा स्वीडिश (Swedish) मा मात्र)